Oge Mmekọahụ maka inwe ọ funụ, inwe mmekọahụ dị mma mgbe ị na -ahụ nsọ - Mmekọahụ-Ịhụnanya-Ndụ
Oge kacha mma gbasara mmekọ nwoke na nwanyị, dịka ndị ọkachamara siri kwuo
Ị nwere ike inwe mmekọahụ na oge ịhụ nsọ gị? Kpomkwem.
Maka nkwenkwe mmekọahụ niile nke kagburu, inwe mmekọahụ oge ka bụ nnukwu. Mana ma ụjọ na -atụ gị ịbanye n'ime ụwa nke inwe mmekọahụ na nke mbụ ya ma ọ bụ na ị bụ onye na -anụ ọkụ n'obi ruo ọtụtụ afọ mana ị ka na -echegbu onwe gị maka ngwa agha, anyị bịara ebe a ịgwa gị: Ewela iwe! Enwere ọtụtụ nnukwu ihe kpatara ị ga -eji nwee ọ joyụ nke inwe mmekọahụ n'oge ị na -ahụ nsọ, yana ọtụtụ ụzọ iji bulie ihe ụtọ mgbe ị na -eme ya.
'Inwekwu nkasi obi n'ihe na -adịghị mma nwere ike imebi ihe mgbochi na -atọ ụtọ mmekọahụ,' ka ọ na -ekwu Shannon Chavez , ọkà n'akparamàgwà mmadụ na onye na -ahụ maka mmekọ nwoke na nwanyị a gbaara ezi àmà na Los Angeles. 'Nnyocha e mere egosila na mmụba anụ ahụ na' inwe mmekọahụ na -adịghị mma 'na -eme ka ndị na -enwe agụụ dị elu karịa.
Nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otu esi enwe mmekọahụ na oge ịhụ nsọ gị.
ihe nwere ike inyere ntutu aka ito eto
Ị nwere ike inwe mmekọahụ na oge ịhụ nsọ gị?
Ihe mbụ na mbụ, ọtụtụ mmadụ ka na -ajụ ajụjụ ma ị bụ nwere ike nwee mmekọahụ na oge ịhụ nsọ gị.
Azịza ya bụ ee. N'ezie, ọ nwere ike bụrụ ihe na -atọ ụtọ. Mgbanwe mgbanwe homonụ nke na -eme n'oge oge gị - ya bụ ịba ụba estrogen na ọkwa testosterone - na -eduga n'ịkpalite mkpali siri ike ( na mmetụta). Akpịrị gị na -emepe emepe ma na -anabata n'oge a, yabụ ọ bụrụ na enwere ọnọdụ ị na -achọ ime, mana ọ naghị arụ ọrụ nke ọma n'oge gara aga, ugbu a bụ oge, kwuru Carlen kọsta , ọkachamara mmekọrịta nwoke na nwanyị na ọkachamara mmekọrịta. (Maka mkpali, lelee ọnọdụ ụmụ nwanyị kacha amasị maka orgasm na -agbawa agbawa.)
Ị nwere ike inwe mmekọahụ n'ọnụ na oge ịhụ nsọ gị?
Inwe mmekọahụ n'ọnụ na oge ịhụ gị dị oke mma. Isi ihe na -echegbu gị nwere ike bụrụ ọgbaghara, mana ọ dabara nke ọma, enwere ọtụtụ nhọrọ dịka iko nsọ nwanyị na diski ịhụ nsọ (karịa na ndị dị n'okpuru) nke ga -enyere aka mee ka ọrụ ọnụ gị bụrụ ọbara efu. Mmekọahụ ọnụ bụkwa oge zuru oke iji lekwasị anya na -akpali mkpali ahụ, nke (ọ bụrụ na ịchọrọ mmegharị ahụ mmegharị ahụ) na -anọdụ n'èzí ọwa mmiri na ikpu gị.
kedu ka ị ga -esi ghara inwe olileanya
Kedụ uru dị n'inwe mmekọ nwoke na nwaanyị?
Otu n'ime uru kacha pụta ìhè nke inwe mmekọ nwoke na nwanyị bụ inwekwu obi ụtọ. Mgbe ị nwere oge ịhụ nsọ gị, homonụ gị na -emebiga ihe ókè, nke pụtara na ọ ga -adịrị gị mfe ị nweta orgasm site na imetụ aka ma ọ bụ banye n'ime, ka Emily Morse, onye na -ahụ maka mmekọrịta nwoke na nwanyị na onye ọbịa nke Mmekọahụ na Emily pọdkastị.
Orgasm nwekwara ike inye aka belata ihe mgbu oge ọ bụla. Orgasm ga-ewepụta kemịkalụ dị mma dị ka oxytocin, dopamine, na endorphins-ihe mgbu anụ ahụ nke anụ ahụ anyị-nke nwere ike ibelata ihe mgbu nke ihe mgbu na ịhụ nsọ nwanyị, Chavez kwuru. Na mgbakwunye, ụfọdụ ụmụ nwanyị na -ahụta inwe mmekọahụ ka ọ na -atọ ụtọ n'ozuzu ha. Otu n'ime nnukwu ihe gbasara inwe mmekọahụ bụ na ị chọghị lube ọ bụla n'ihi na ị dịla mmiri nke ukwuu, nke pụtara na ụfọdụ ọnọdụ dịịrị ụfọdụ ụmụ nwanyị mfe ịbanye, Costa kwuru. Ụfọdụ ndị ọkachamara na -atụ aro ịrapara n'otu ọnọdụ ka ọ ghara ịmepụta ọgbaghara, mana m na -ekwu, gaa maka ya, 'ka ọ gbakwụnyere.
Enwekwara ihe akaebe na -egosi na inwe mmekọahụ n'oge ịhụ nsọ gị nwere ike ibelata ya. Site na orgasm ọ bụla nke na -etinye oxytocin n'ime ahụ gị iji belata ihe mgbu, mgbachi nke na -eso orgasm ahụ na -enyere aka iwepụ eriri akpa nwa ngwa ngwa karịa ka a hapụrụ ya na ngwaọrụ ya. Nke a apụtaghị na otu romp ga -eduga na oge nsọ gị ga -apụ n'ụtụtụ, mana ọ ga -ebelata ya nke ọma ka ị wee hụ ihe dị iche.
Enwere m ike ịtụrụ ime na -enwe mmekọahụ n'oge ịhụ nsọ m?
Ọ ga -ekwe omume ịtụrụ ime n'oge oge ịhụ nsọ gị, yabụ iji usoro nhọrọ ịmụ nwa gị dị oke mkpa.
Maka ụmụ nwanyị nwere obere okirikiri, ụbọchị 21 ruo 24 na -emegide ụbọchị 28 ruo 30, ihe egwu dị elu, ka nọọsụ edebanyere aha Gigi Gaytan kwuru. Sperm nwere ike ịdị ndụ ihe dị ka ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ, mgbe ụfọdụ ọbụna ruo ụbọchị ise, yabụ ọ bụrụ na mmekọ nwoke na nwanyị emee na njedebe nke oge ahụ na ịhụ nwa ga -amalite n'isi na spam ka dị ndụ, enwere ohere nwanyị nwere ike ịtụrụ ime. Jiri condom (ọbụlagodi na ị nwere LARC).
Ndụmọdụ gbasara mmekọahụ oge:
Ọ dị mma, yabụ ịchọrọ ịnwale mmekọahụ oge. Nke a bụ otu esi eme ya ka ọ tọọ ụtọ.
1. Jiri ohere nke inwe mmetụta dị elu.
Cheta na atụmanya na -emekarị ka agụụ na -agụ gị, ọ nwere ike ime ka orgasm gị ka njọ, '' Morse na -ekwu. Nsụgharị: Tinye aka n'ihu n'ihu. 'Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adịrị gị mma inwe mmekọahụ ọnụ, ị nwere ike duzie onye gị na ya ga -eji oge gị na ara gị na -egwuri egwu, na -akwa ụta n'apata ụkwụ gị, ma jiri nwayọ na -eku ume na mmamiri gị, nke nwere ike bụrụ naanị mkpali ịchọrọ ịkwalite orgasm gị.
nwa agbọghọ na nwa agbọghọ gbasara ike mmekọahụ
2. Ncha elu.
Ọ bụ ezie na mmekọahụ na-adịghị mma nwere ike ịbụ ụfọdụ n'ime mmekọahụ kacha ekpo ọkụ, ọ bụrụ na ọ na-eme ka ị mara onwe gị, ụfọdụ ndị na-achọta ịsa ahụ ịsa ahụ na-enyere aka ịtọghe ihe mgbochi.
Ọ bụrụ na ị na -ama jijiji banyere ọbara, gbalịa inwe mmekọahụ na ịsa ahụ , nke ga -asachapụ ya niile ka ị na -awagharị, ma ọ bụ n'ime ite ịsa ahụ Gloria Brame , onye na -agwọ ọrịa nwoke na onye edemede nke Mmekọahụ maka ndị toro eto .
3. Chebe akwa gị.
Ọ bụrụ na ị na -echegbu onwe gị maka ịcha, ị nwere ike were akwa kpuchie akwa gị mgbe niile iji dozigharịa ihe ndina gị maka inwe mmekọahụ. Ị nwedịrị ike nweta akwa akwa pụrụ iche dịka akwa rọba iji chekwaa akwa gị, Chavez kwuru.
otu esi eyi bikini
4. Gbalịa diski ịhụ nsọ.
N'adịghị ka iko ma ọ bụ tampons, diski nsọ nwanyị nwere ike eyi n'oge mmekọahụ. A na -etinye diski ndị na -agbanwe agbanwe n'ime ọwa mmiri dị ka tampon mana nọdụ elu karịa n'ime ikpu gị, na fornix. Nke a na -enye gị ohere inwe mmekọahụ gbasara mmekọahụ na -enweghị ọgbaghara.
5. Nwaa ọnọdụ ọhụrụ.
Mgbe ị na -ahụ nsọ gị, ụfọdụ ụmụ nwanyị na -ekwupụta mkpọchi pelvic karịa, nke bụ ịdị arọ nke nwere ike ịkpalite mkpali, Costa kwuru. Nke a bụ ihe mere ụfọdụ ụmụnwaanyị na -ekwupụta na ha na -achọ inwe mmekọ nwoke na nwanyị karịa ka ha na -ahụ nsọ ha, na -enwechaghị nke ọbụla. Ọnọdụ dị nwayọ dị ka ngaji nwere ike ịbụ ụzọ zuru oke iji nwee ọ toụ inwe mmekọahụ ugbu a, na -agbakwụnye Morse: Ị nwere ike jiri omimi nke ịbanye na akụkụ dị iche iche gwuo egwu iji jide n'aka na ọ baara gị uru. (Otu a ka ọ dịkwa maka onye ozi ala ọzọ!)
6. Nweta ntakịrị kinky.
Ọ bụrụ na otu onye n'ime unu na -ama jijiji banyere ọbara, nwaa iji ihe mkpuchi ihu. Oge gị bụ oge zuru oke iji bulie inwe mmekọahụ site na ịgagharị mmetụta ndị ọzọ dị ka ihe anya na ụda, ka Shallon Lester, onye dere ihe ncheta mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kwuru. Ọpụpụ na Ohs na YouTube mmekọahụ na ọkachamara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ị gaghị aga n'ihu Iri ise ndo jiri ụdị mgbochi akpụkpọ anụ ọ bụla - kpachapụ naanị uwe elu gị wee wụpụ ya n'anya onye gị na ya na -emekọ ihe, wee tụkwasị aka ha ma gwa ha na ha enweghị ike ịmegharị ma ọ bụ lepụ anya. A ga -ebuli uche ọ bụla elu, ị ga -ejikwa mmetụta were egwu gwuo egwu, site na ntu ruo ebe ntụpọ, na -enwekwu mkpọtụ maka ego gị.
7. Nwale na mpaghara erogenous na -apụtachaghị ìhè.
Ọ bụghị onye ọ bụla na -abanye [mmekọahụ oge], mana nke ahụ apụtaghị na ị ga -ewepụ mmekọahụ kpamkpam, Costa kwuru. Enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ị ga -esi chọọ ihe ụtọ n'etiti onwe gị nke na -agbasaghị na [mmekọ nwoke na nwanyị]. Malite ikpo ihe ọkụ ọkụ site na ịgagharị ụfọdụ mpaghara a na -eju anya. Anyị na -ekwu okwu ntị, aka, afọ - ọbụlagodi ala ala ụkwụ.
8. Na -eji condom mgbe niile.
Agbanyeghị na cervix gị na -emechi ọtụtụ oge, ọ na -emepe n'oge ịmụ nwa na mgbe ị na -ahụ nsọ. Otu ọrụ nke cervix bụ ịchekwa akpa nwa gị pụọ na nje nwere ike ịbanye n'ime ikpu n'oge mmekọahụ, ka nọọsụ ahaziri aha ya bụ Jennifer Tine kwuru. N'ime oge, ọ na -emepe ntakịrị ka ikwe ka akpanwa wụpụ. Nke a na -emepe obere oghere maka nje bacteria ịba n'ime akpa nwa, na -amụba ohere nke ibute ọrịa. Yabụ, ọbụlagodi na ị nwere mmekọrịta siri ike, ị ka ga -achọ iji condom n'oge mmekọahụ. Ihe ikpeazu ịchọrọ bụ ọrịa ị gaara ezere, ọkachasị n'akụkụ ahụ gị. Gbaa mbọ hụ na inwe mmekọahụ oge niile bụ mmekọ nwoke na nwanyị.
9. Nabata ịnwale ihe niile ozugbo iche echiche.
Naanị 55% nke ndị okenye na -enwe mmekọahụ n'oge ọnwa ahụ, dịka ọmụmụ nke Flex . Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya, ị nwere ike chọpụta na ị n'ezie dị ka ya. Maka ọtụtụ ndị di na nwunye na -anwalebeghị mmekọahụ oge, inye ya ohere nwere ike bụrụ ohere na -atọ ụtọ iji merie egwu nke amaghị. Onye ma? Ị nwere ike hụ ya n'anya. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị gaghị eme ya ọzọ.
suut maka ndị ọkachamara na -eto eto nwanyị
esi mee ka gị na-amụbawanye ngwa ngwa
elu spaghetti eriri tank n'elu
kedu ka esi ekwu ma ọ bụrụ na mmekọrịta gị bụ nsí